"Virgil Van Dijk Waa Awood Xoog Leh" Gomez Ayaa Sidaasi Yidhi Xili Uu U Waramay Sky Sports? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
"Virgil van Dijk Waa Awood Xoog Leh" Gomez Ayaa Sidaasi Yidhi Xili Uu u Waramay Sky Sports?
Virgil van Dijk waa “awood xoog leh” isla markaana saaxiibkiisa Liverpool Joe Gomez ayaa ku celceliyay inuu awoodo inuu ka garab ciyaaro.
Gomez iyo Van Dijk ayaa sameeyay iskaashi adag wadnaha daafaca ugu fiican Premier League, iyadoo xiddigii hore uu ka soo kabsaday dhibaatooyin dhaawacyo la taaban karo oo uu ku soo bilaabayo line-upka Jurgen Klopp.
Van Dijk ayaa yimid Anfield bishii Janaayo 2018 isagoo ah daafaca ugu qaalisan adduunka, waana rikoor tan iyo markii uu dhaafay rikoorkii Harry Maguire ee Manchester United, oo durbadiiba xiriir dhow la yeeshay xiddiga reer England Waxaana Gomez Sky Sports u sheegay.
“Waxaan ahaa daafac dhexe oo da ‘yar, runti kama helin kulamo badan [Liverpool] intii aan jeclaan lahaa laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee uu u soo galo, wuxuu ku gaadhay gacmo furan waxaanan isla markiiba xiriir sameysanay.
Xaqiiqda ah inuu yahay qof dhulka ka hooseeya garoonka, runtii si fiican ayaan ula qabsanaa xiriir weynna waan la leennahay.
Waxaan wada hadalnaa waqtiyada sidan oo kale ah, waxaan nahay ‘FaceTime’ waxaan ka wada hadalnaa waxyaabaha guud ahaan si aan u caawino garoonka dhexdiisa markii aad fahamtaan. Isagu waa xaaskaaga dhamaadka maalinta.
“Mararka qaar wuxuu i siiyaa maqal, laakiin waa caawinaad weyn iyo xoojin kalsooni kaliya inaan kula joogo qof adiga oo kale ah. Marka uu jiro dagaal fool ka fool ah, waad ogtahay inuu xukumi doono, runtii ma lumiyo madax. dhamaan.
Kaliya waxaan kaa heystaa adiga iyo joogitaankiisa, aniga maahan aniga, waa kooxda oo dhan iyo garoonka. Marka Virgil uu dhaco, waxaan u maleynayaa inay xoogaa kacsan tahay oo walwalsan tahay laakiin waa awood dhab ah oo xamaasad leh ka garab ciyaar. ”
Gomez wuxuu Liverpool kaga soo biiray Charlton Athletic isagoo 18 jir ah sanadkii 2015 wuxuuna qirtay inay qaadatay waqti ay ku fahmaan baaxadda kooxda iyo rajooyinka isaga ku dhici doona.
Kubada cagta ayaa aheyd waxa aan ogaa oo aan gadaal ka fiirinayay, waxay aheyd wax laga xumaado, ”ayuu yiri Gomez. “Waa naadi aad u weyn isla markaana daacadnimo ah, uma maleynayo inaan gartay heerka naadiga iyo waxa aan ku baranayay marka la fiiriyo sida aan rajeynayo.
“Laakiin waxaan u maleynayaa inaad tahay inaad madaxa iskaga dhigto waana inaad aqbashaa in markii aad gudan weydo ay tahay inaad qarka u saarto gorgortankana dib ayaa loo noqonayaa – ma aha dareenka xun, laakiin waa uun inaad filato. Naadiga, waxay leedahay taariikh sidan oo kale xoog badan waana inaad taas raacdaa.
Waxaan u maleynayaa sida ugu dhaqsaha badan ee aan u aado xilli-ciyaareedkeyga, inaan gartay baaxada naadiga. Waxaa la iiga baran jiray UK oo aan aadi lahaa xero tababar, laakiin xilli ciyaareedkeygii ugu horeeyey ee Liverpool, waxaan aadnay Thailand. Waxaan soo galnay hudheelka waxayna noqotay wax lagu qoslo, nabadgelyada meelwalba iyo boqolaal dad ah. Isla markiiba halkaas ayaan ka dhacay, waan ogaaday.
“Ka dib waxaan u duulnay Australia waxaanan la ciyaarnay Brisbane Roar garoonkana waa la buuxiyay. Taasi waa markii ugu horreysay ee aan maqlo ‘Waligaa Waligaa ma Aadi doontid’ ‘waxaanan is iri’ Haa, tani waa cabir kale. ‘”